Sat, Jul 11, 2020 at 12:55pm
IPL २०१९ : फाइनल प्रवेशका लागि खेल्दै मुम्बई र चेन्नाई
काठमाडौं, २४ बैशाख । मंगलबारबाट प्लेअफ चरणका खेलहरु सुरु हुनेछन् । इन्डिनय प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०१९ को लिग चरणका खेलहरु सकिसकेका छन् । जसअन्तर्गत पहिलो क्वालिफायरमा शीर्ष स्थानको मुम्बई इन्डियन्स र दोस्रो स्थानको चेन्नाई भिड्दैछन् । यस खेलको विजेता सिधै फाइनल पुग्नेछ । यस्तै पराजित हुने टोलीले पनि फाइनलका लागि अर्को मौका भने पाउनेछ । भोली हुने दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदरावादबीच हुने एलिमिनेटरको विजेताले..
अन्तर्राष्ट्रिय कराँतेमा नेपाललाई ५ स्वर्णसहित ८ पदक, सबै विजेता रुपन्देहीका
बुटवल, २४ वैशाख । १६ औं ओकेनवा गजुरियो कराँते खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत मलेसियामा सम्पन्न सहभागी नेपाली खेलाडीले पाँच स्वर्ण सहित आठ पदक जितेका छन् । विजेताहरु सबै रुपन्देहीका हुन् । स्वर्ण पदक विजेताहरुमा ईश्वर विक, युजिन गुरुङ, समुद्र सिंह राना, सविन श्रेष्ठ र कमल चौधरी रहेका छन् । यस्तै संगम नेपालीले एउटा रजत र हिरादेवी राईले काता तथा कुमितेमा गरी दुईवटा रजत..
भारतमा साबित्राको दमदार प्रदर्शन, ४ गोलसहित वुमन अफ दी म्याच
काठमाडौँ, २३ बैशाख । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल खेलाडी साबित्रा भण्डारीले भारतीय महिला लिगको डेब्यू खेलमा नै शानदार प्रदर्शन गरेकी छन् । सेथु फुटबल क्लबमा आबद्ध साबित्रा डेब्यू खेलमा ४ गोलसहित वुमन अफ दी म्याच भइन् । उनको टोली सेथुले मणिपुर पुलिस स्पोर्टस क्लबमाथि ६-४ को शानदार जित निकाल्दा साबित्राले ४ गोल गरिन् । पहिलो हाफमा १ पछि अर्को गोल थपेकी उनले दोस्रो..
मुम्बईले कोलकातालाई हराएपछि हैदरावादको भाग्य चम्कियो
काठमाडौँ, २३ वैशाख मुम्बई इन्डियन आईपीएल क्रिकेटको पहिलो क्वालिफायरमा पुगेको छ । आइतबार राति भएको अन्तिम खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्समाथि ९ विकेटको सहज जित निकाल्दै मुम्बईले पहिलो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको हो । कोलकाता भने हारसँगै आईपीएलबाट बाहिरिएको छ । १३४ रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको मुम्बईले १६.१ ओभरमा एक विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्‍यो । मुम्बईको जितमा कप्तान रोहित शर्माले अविजित ५५..
नेपाललाई विश्वमा चिनाउन खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका
सुर्खेत, २२ वैशाख कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन खेल क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । नमूना युवा क्लब भैरवस्थान सुर्खेतद्वारा आज यहाँ आयोजित कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो राशिको ब्याडमिन्टन खेल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री रावलले खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदानले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान उचालिएको बताउनुभयो । “स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्न र राष्ट्रको पहिचान देखाउन खेल र..
र्याफ्टिङ विश्वकपमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई बिदाइ
कास्की, २१ वैशाख यही मे १६ देखि १९ सम्म अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डको टुली नदीमा हुने ‘र्याफ्टिङ वल्र्डकप च्याम्पियनसिपमा’ सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई बिदाइ गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र्याफ्टिङ महासङघको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी खेलाडीलाई पर्यटन व्यवसायी सोम थापा, दीपकराज अधिकारी र नरेशबहादुर भट्टराईको पहलमा कार्यक्रम गरी आज पोखरामा बिदाइ गर्नाका साथै शुभकामना पनि दिइयो । राष्ट्रिय ¥याफ्टिङ प्रतियोगिता २०७५ बाट..
बाहिरिए दिल्लीका बलर कागिसो रबाडा, दक्षिण अफ्रिका चिन्तित
नयाँ दिल्ली, २० वैशाख । जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा सर्वाधिक विकेट लिने बलर रहेका कागिसो रबाडा चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् । दिल्ली क्यापिटल्सका यी दक्षिण अफ्रिकी खेलाडीले १२ खेलमा २५ विकेट लिएका थिए । विश्वकपको पुर्वसन्ध्यामा कागिसोको यो चोटले दक्षिण अफ्रिकालाई समेत चिन्तित बनाएको छ । दिल्लीको अघिल्लो खेलमा राबडाले खेलेका थिएनन् । रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरसँग अप्रिल २८ तारिखमा भएको..
आइसीसी टी-२० वरियतामा नेपालको फड्को, शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान
चितवन, २० वैशाख । आइसिसी वरियतामा नेपालको सुधार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) टी ट्वान्टी क्रिकेटको वरियतामा नेपालले तीन स्थान सुधार गरेको छ । आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले दुई राष्ट्रलाई पछि पार्दै ११ औंँ स्थानमा उक्लिएको हो । नेपालले आयरल्याण्ड र जिम्बाबेलाई पछि पार्दै ११औँ स्थानमा उक्लिन सफल भयो । यसअघि नेपाल १४औँ स्थानमा थियो । टी ट्वान्टी वरियताको शीर्ष स्थानमा..
राेमाञ्चक Super-over मा हैदराबादलाई Eliminate गर्दै मुम्बई प्लेअफमा
वैशाख, २० वैशाख मुम्बई इण्डियन्स आईपीएलको प्लेअफमा स्थान बनाउन सफल भएको छ । सनराइजर्स हैदराबादलाई एक ओभर इलिमिनेटरमा पराजित गर्दै मुम्बई प्लेअफमा पुग्न सफल भयो । एक ओभर इलिमिनेटरमा मुम्बईका जस्प्रित बम्राहले दुई विकेट लिएपछि हैदराबादले पूरा ६ बल पनि खेल्न सकेन । उसले जम्मा ८ रन बनायो । जुन लक्ष्यलाई मुम्बईले तीन बलमै पूरा ग¥यो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मुम्बईले २०..
काठमाडौँ, १९ वैशाख अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)को एकदिवसीय क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपाल १४औँ स्थानमा यथावत् रहेको छ । आइसिसीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल १५२ अङ्कसहित १४औँ स्थानमा यथावत् रहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएइ)मा सम्पन्न युएइविरुद्वको एकदिवसीय सिरिज खेलेपछि नेपालले आइसिसीबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको हो । त्यतिबेला नेपालले युएइविरुद्व तीन खेल खेलेको थियो । गत माघमा भएको उक्त..
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नगदसहित सम्मानित
काठमाडौँ, १९ वैशाख संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) विरुद्धको ऐतिहासिक एकदिवसीय र टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खला जितेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई आज नगदसहित सम्मानित गरिएको छ । ऐतिहासिक शृङ्खला विजेता नेपाली टोलीलाई आज युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केवशकुमार विष्टले खेलाडीलाई जनही रु पाँच लाख अफिसियललाई जनही रु दुई लाख तथा मुख्य प्रक्षिकलाई..
बार्सिलोनाका लागि कीर्तिमानी, मेस्सीले पूरा गरे ६ सय गोल
एजेन्सी, १९ बैशाख । लियोनल मेस्सीले क्लबका लागि ६०० गोल पूरा गरेका छन् । बुधबार राति लिभरपुलविरुद्धको खेलमा दुई गोल गरेका उनले बार्सिलोनाका लागि कीर्तिमानी ६०० गोल पूरा गरेका हुन् । बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीले खेलको ८२ औँ मिनेटमा गोल गर्दै नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन् । मेस्सीले यसै सिजनमा मात्र फ्रिकिकमा ८ गोल गरेका छन् । मेस्सीले बार्सिलोनाका लागि १४ वर्ष अगाडि मे..
सन्दीप नखेलेको खेलमा चेन्नईसँग दिल्लीकाे लज्जास्पद हार
काठमाडौँ, १९ वैशाख चेन्नई आईपीएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । बुधबार भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको दिल्ली क्यापिटल्सलाई ८० रनले पराजित गर्दै चेन्नई शीर्ष स्थान उक्लिएको हो । चेन्नईस्थित चिदामबराम क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १७९ रन बनाएको थियो । चेन्नईका लागि सुरेश रैनाले ५९ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले..
अन्तिम विश्वकप खेल्दैछन् यी ५ क्रिकेटका 'बाहुबली'हरू
एजेन्सी, १८ वैशाख । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरू हुन एक महिना बाँकी छ । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने विश्वकपबारे विभिन्न चर्चा भइरहेका छन् । यी खेलाडीहरु एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकपको खेल करीअरको अन्त्यतिर छन् । १. इमरान ताहिर विकेट लिएपछि हावामा हात फैलाउँदै तिव्रगतिमा कुँदेर सेलिब्रेसन गर्ने दक्षिण अफ्रिकाका लेगस्पिनर इमरान ताहिर यो विश्वकपपछि एकदिवसीय खेलमा मैदान देखिने छैनन् ।..
एन्फा एकेडेमीका लागि ८१ जना खेलाडी छनोट
काठमाडौँ, १८ वैशाख । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले एन्फा एकेडेमीका लागि ८१ जना उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा बुधबार बिहान सम्पन्न छनोटबाट एन्फाले मेडिकल परीक्षणका लागि ८१ जना यू–१३ उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको हो । मुलुकभरबाट छानिएर आएका खेलाडीबीच वैशाख १२ देखि अन्तिम चरणको छनोट गर्दै एन्फाले ८१ खेलाडी छानेको सूची तयार पारेको हो..
काठमाडौँ, १८ वैशाख। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले एन्फा एकेडेमीका लागि ८१ जना उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको छ । ANFA एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आज बिहान सम्पन्न छनोटबाट एन्फाले मेडिकल परीक्षणका लागि ८१ जना यू–१३ उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको हो । मुलुकभरबाट छानिएर आएका खेलाडीबीच वैशाख १२ देखि अन्तिम चरणको छनोट गर्दै एन्फाले ८१ खेलाडी छानेको सूची तयार पारेको हो..
IPL : दिल्ली र चेन्नई भिड्दै, सन्दिपले खेल्ने सम्भावना प्रचुर !
काठमाडौँ, १८ वैशाख आईपीएलमा आज सन्दीप लामिछाने रहेको दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किंग्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । चेन्नईस्थित चिदामबराम क्रिकेट स्टेडियममा दुवै टोली जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा रहने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छन् । प्ले अफ पुगिसकेका दुवै टोली दबाब रहित मैदान उत्रने छन् । शीर्ष स्थानको दिल्लीको १२ खेलबाट १६ अंक रहेको छ । चेन्नईको पनि १२ खेलबाट १६ अंक रहेको छ । चेन्नई नेट..
साफ यु–१८ फुटबल च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुँदै
काठमाडौँ, १७ वैशाख दक्षिण एशियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यु–१८ फुटबल च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ । आज यहाँ बसेको दक्षिण एशियाली फुटबल महासङ्घको साधारणसभाले साफ यु–१८ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप नेपाललाई आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको छ । प्रतियोगिता सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २० देखि २९ सम्म काठमाडौँमा हुनेछ । बैठकले यस वर्षका लागि उमेर समूहका तीन..
आधीरातमा सन्दीपलाई नेपाली क्रिकेटको चिन्ता लागेपछि ...
काठमाडौं, १७ वैशाख भारतमा इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) खेलिरहेका नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नेपाली क्रिकेटको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राति ट्वीट गर्दै सन्दीपले यो मध्यराति आफू नेपाली क्रिकेटका बारेमा सोचेर चिन्तित भएको बताएका छन् । ‘अहिले मध्यराति भएको छ । म हाम्रो नेपाली क्रिकेटको बारेमा सोचिरहेको थिएँ’ उनले लेखेका छन्, दुःख लाग्दो कुरा हामी निलम्बनमा छौं, तीन वर्ष भयो..
आइसीसी विश्वकप ट्रफी केही घण्टाका लागि नेपाल ल्याइँदै
काठमाडौँ, १७ बैशाख । आइसीसी क्रकेट विश्वकप ट्रफी फेरि नेपाल ल्याइने भएको छ । आगामी जेठ महिनामा हुने प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको अवसर पारेर नेपालय इन्टरनेशनलले सो ट्रफी नेपाल ल्याउन लागेको हो । केही घण्टाका लागि मात्र यसअघि विश्वकप ट्रफी टुरका बेला नेपाल ल्याइएको उक्त ट्रफी लाई यसपटक विशेष रुपमा ल्याउन लागेको बताइएको छ । आगामी मे ४ तारिखका दिन सो ट्रफी नेपाल ल्याएर केही..
बेंगलोरलाई हराउँदै दिल्ली प्लेअफमा, सन्दीपको खराब प्रदर्शन
एजेन्सी, १६ वैशाख दिल्ली क्यापिटल्स भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को शीर्ष स्थानमा उक्लिँदै प्लेअफमा पुग्ने दोस्रो टोली भएको छ। आइतबार रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई १६ रनले हराउँदै दिल्ली अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। दिल्लीले दिएको १ सय ८८ रनको लक्ष्य पछ्याएको विराट कोहलीको नेतृत्वमा रहेको बैंलोर २० ओभर पुरै खेल्दै ७ विकेट गुमाएर १७१ रन मात्र बनाउन सक्यो। बैंलोरका लागि ओपनर पार्थिव..
दिल्लीद्वारा आरसीबीलाई १ सय ८८ रनको चुनौती, सन्दीप 'प्लेइङ्ग-११' मा
काठमाडौं, १५ वैशाख इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटलले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर(आरसीबी)लाई १८८ रनको चुनौती दिएको छ। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको टिम दिल्ली क्यापिटलले आरसीबीलाई १८८ रनको चुनौती पेश गरेको हो। दिल्लीका लागि शिखर धवन र श्रेयश अयरले अर्धशतक बनाए। धवनले ३७ बलमा ५० रन बनाए भने अयरले ३७ बलमा ५२ रन बनाए। अन्य ब्याट्सम्यानले..
एसिसी यू–१६ : मलेसियालाई ५९ रनले हराउँदै नेपालले जित्यो उपाधि
काठमाडौँ, १५ वैशाख नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले एसिसी १६ वर्षमुनि (यू–१६) पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिमाथि कब्जा जमाएको छ । थाइल्याण्डको चियाङमाईमा आज भएको फाइनल खेलमा नेपालले मलेशियालाई ५९ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो । त्यस्तै नेपालको यो लगातार दोस्रो उपाधि हो । गत संस्करणमा भएको फाइनलमा नेपालले सिङ्गापुरलाई ७१ रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ..
'IPL'को २ खेल : पहिलो खेलमा सन्दीपको टिम दिल्ली र बैंग्लाेर भिड्दै
काठमाडौँ, १५ वैशाख । इन्डियन प्रिमिएर लिग (आईपीएल) मा आइतबार दुई खेल हुँदैछन् । पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लाेर तथा दोस्रो खेलमा कोलकात्ता नाईट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स भिड्ने छन् । अपरान्ह ४ बजेर १५ मिनेटमा हुने पहिलो खेलमा अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको दिल्ली र आठाैँ स्थानमा रहेको बैंग्लाेरबिच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । हालसम्म खेलेका ११ खेलमध्ये सातमा जित निकालेको..
कास्की, १४ वैशाख पोखरामा आयोजना भएको एशियन कप ट्राइयाथलन च्याम्पियनसिपको उपाधि जापानका माकोतो ओदाकुराले जितेका छन् । नेपाल ट्राइयाथलन सङ्घको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइयाथलन युनियनको प्राविधिक सहयोगमा आज भएको च्याम्पियनसिपमा ओदाकुराले ५४ मिनेट १७ सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरी स्वर्ण पदक जितेका हुन् । फेवातालमा ७५० मिटर पौडी, २० किलोमिटर साइक्लिङ र पाँच किलोमिटर दौड सम्मिलित ट्राइयाथलनमा १९ जना प्रतिस्प्रर्धीलाई पछि पार्दै..
U-19 महिला च्याम्पियनसिप फुटबल - नेपाल अस्ट्रेलियासँग हार्यो
काठमाडौं, १३ वैशाख । शुक्रबारदेखि म्यानमारमा सुरु भएको एसियाली फुटबल महासंघ-एएफसी यू-१९ महिला च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरणको छनोटमा नेपालले खराब सुरुवात गरेको छ । प्रतियोगिताको समूह ‘ए’मा रहेको नेपालले पहिलो दिन अस्ट्रेलियासँग ११-१ गोलको हार ब्यहोर्‍यो । अस्ट्रेलियाकी मेरी फलर एक्लैले पाँच गोल गरिन् । १६ वर्षीय यी स्ट्राइकरले सुरुको १५ मिनेटमै ह्याट्रिक गरेकी थिइन् । उनी अस्ट्रेलियाको सिनियर टोलीकी सदस्य पनि हुन्..
पहिलो पटक कराँतेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता चितवनमा
चितवन, १३ वैशाख पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कराँते प्रतियोगिता यहाँ हुनेभएको छ । जापान गोजुरियो कराँते डो केन्वाकाई नेपाल सङ्घ चितवन शाखाको आयोजनामा तेस्रो इण्डो–नेपाल कराँते प्रतियोगिता हुन लागेको सङ्घका सल्लाहकार एवं प्रतियोगिता संयोजक पुष्प आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिता यही वैशाख १९ गते देखि २१ गतेसम्म भरतपुर महानगरपालिका–१५ मङ्गलपुरमा हुने आयोजकले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको हो । प्रतियोगितामा..
कोलकाताको लगातार छैटौं हार, राजस्थान ३ विकेटले विजयी
एजेन्सी, १३ वैशाख कोलकाता राजस्थानसँग ३ विकेटले पराजित भएको छ। १७ वर्षिय रियान परागले बिहिबार कोलकाताविरूद्ध खेलेको ४७ रनको महत्वपूर्ण पारीको सहयोगमा राजस्थान रोयल्सले कोलकाता नाइट राइडर्समाथि महत्वपूर्ण जित हासिल गरेको हो। ११ म्याचमा चौथो जित हात पारेपछि राजस्थानको प्लेअफको दौडमा कायम बनेको छ। बिहिबारको खेल हारेको भए ऊ प्लेअफको दौडबाट बाहिरिने निश्चित थियो। यस म्याचपछि राजस्थान सहित कोलकाता र बेङ्लोरको समान ८ अंक..
आईपिएल बिचमै छोडेर अचानक नेपाल फर्किए सन्दिप, यस्तो छ भित्री कारण
काठमाडौँ, १२ वैशाख भारतमा भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) खेलिरहेका नेपाली क्रिकेट टिमका महत्वपूर्ण सदस्य सन्दीप लामिछाने नेपाल आएका छन् । व्यक्तिगत कामका कारण आइपीएल चलिरहेकै बेला बुधबार उनी नेपाल आएका हुन् । बाँकि खेल खेल्न सन्दीप लगत्तै भारत फर्किने उनका म्यानेजर रमन सिवाकोटीले जानकारी दिए । दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपीएल खेलिरहेका सन्दीपले यो संस्करणको ५ खेलमा ८ विकेट लिइसकेका छन् । दिल्लीले १२औं..
काठमाडौँ, १२ वैशाख एशियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी) यू–१६ पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपाल र आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डबीचको खेल रद्द भएको छ । थाइल्याण्डको चियाङमाईमा चट्याङसहित वर्षा भएपछि नेपाल र थाइल्याण्डबीच भएको समूह चरणको अन्तिम खेल नतिजाविहीन बनेको हो । नेपालले दिएको २३५ रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रेको आयोजक थाइल्याण्डले जवाफी ब्याटिङ गरिरहँदा भारी वर्षा भएपछि खेल पुनः सञ्चालन हुन नसकेकाले रद्द भएको..
Results 1928: You are at page 26 of 65